माछापुच्छ्रे बैंकको 'वालेट' मा के-के छन् विशेषता र सुविधा? :: Setopati
माछापुच्छ्रे बैंकको 'वालेट' मा के-के छन् विशेषता र सुविधा?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, फागुन १०
कमर्सियल बैकिङ इतिहासमा माछापुच्छ्रे बैंकले पहिलो पटक आफ्नै मोबाइल वालेट सञ्चालन ल्याएको छ। बैंकले विभिन्न नयाँ विशेषता र सुविधासहित 'रेमिट्याप' मोबाइल वालेट सञ्चालनमा ल्याएको हो।
विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा जम्मा गर्न पाइने प्रमुख सुविधा भएको बैंकका विप्रेषण प्रमुख सुदन भण्डारीले जानकारी दिए। तर यो सुविधा केही दिनपछि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्नेगरी सञ्चालनमा आउने उनले बताए।
'यसअघि कुनै पनि वालेटमा नभएका सुविधा हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौं,' भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, 'दोस्रो चरणमा विश्वभर रहेका नेपालीले रेमिट्याप एपबाटै पैसा पठाउन सक्नेछन्।'
एपमा मुख्यगरी तीन वटा फरक विशेषता रहेको उनले जानकारी दिए।
पहिलो त एप प्रयोग गरेपछि भर्चुअल कार्ड बनाउन सकिन्छ। जसमार्फत सपिङ गर्दा केही रकम अपुग भए साथीसँग कार्डमार्फत सहयोग माग्न सकिन्छ।
'खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट लगायत बिल तिर्न त सकिन्छ नै, भर्चुअल कार्ड सिर्जना गरी सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै पैसा लिन र भुक्तानी दिन सकिन्छ,' उनले भर्चुअल कार्डबारे जानकारी दिँदै भने, 'पठाउने रकम कार्डमा लेखेर सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट तपाईंको साथीले कार्ड पठाइदिनुहुन्छ। त्यो कार्डलाई मर्चेन्टमा क्युआर स्क्यान गरेर रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ।'
यस्तो अवस्थामा रकम पाउने व्यक्तिले भुक्तानी लिन रेमिट्याप एप डाउनलोड गर्न जरूरी नभएको भण्डारीले बताए।
यसको अर्को प्रमुख विशेषता भनेको एउटै एकाउन्टबाट व्यक्तिगत र मर्चेन्ट दुवैले कारोबार गर्न सकिने सुविधा हो।
'तपाईं व्यवसायी भएमा व्यवसाय र व्यक्ति दुवै हिसाबले एउटै एपमार्फत छुट्टाछुट्टै कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ,' भण्डारीले भने, 'एकाउन्ट स्विच गरेपछि अरू झन्झट हुँदैन। व्यक्तिगत र व्यवसायिक भुक्तानी फरक हिसाबले तुरून्तै लिन सकिन्छ।'
अहिले कुनै व्यापारीले क्युआर लिनुपर्दा फारम भर्नुपर्ने, केही दिन कुर्नुपर्ने समस्या झेलिरहेका छन्।
रेमिट्याप एपमा आवश्यक डकुमेन्ट बैंकमा प्राप्त भइसकेपछि बैंकले केवाइसी भेरिफाइ गर्ने र केवाइसी स्वीकृत हुनासाथ व्यक्तिको मोबाइलमा तुरुन्तै क्युआर कोड आउने उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै केवाइसीका लागि ग्राहकले भिडिओ समेत अपलोड गर्न सक्नेछन्। भण्डारीका अनुसार भिडिओ हेरेर केवाइसी टिमले सजिलै स्वीकृत गर्नेछन्।
'क्युआरका लागि दोस्रो झन्झट गर्नु पर्दैन। एउटै विवरणबाट प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ,' उनले भने, 'व्यक्तिको विवरण सुरक्षित राख्न नयाँ सुविधा थपेका हौं। भिडिओमा आफ्नो नाम र आइडी अपलोड गरेको छु भन्ने जानकारी दिए हुन्छ।'
नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा चलाउन सकिने हुँदा जुनसुकै वर्गका सेवाग्राहीले बिना झन्झट एप चलाउन सक्ने बैंकको दावी छ। रेमिट्याप एप सञ्चालन विधिबारे माछापुच्छ्रे बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा स्पष्ट भिडिओ अपलोड गरिएको छ। प्रयोगकर्ताले सजिलोका लागि भिडिओ हेर्न पनि सक्नेछन्।
वालेटमा पैसा राख्न बैंकले दुइवटा गेट-वे दिएको छ। माछापुच्छ्रे बैंकका साथै कनेक्ट आइपिएसका प्रयोगकर्ताले सजिलै वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्न सक्नेछन्। बैंकले अन्य डिजिटल वालेटसँग सहकार्य गरी कारोबार बढाउने योजना बनाएको भण्डारीले बताए।
'तपाईंले वालेटमा भएको पैसा कार्डमा पनि राख्न सक्नु हुनेछ,' भण्डारीले भने, 'छिट्टै खल्ती, इसेवा, प्रभु-पे जस्ता वालेटसँग समन्वय गरी दुवै पक्षको क्युआर इन्टरकनेक्ट गर्ने योजना छ।'
एप डाउनलोडपछि व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकले विवरण जाँच गरिसकेपछि यसको सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रेमिट्याप चलाउने विधिबारे हेर्नुस् भिडिओः
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन ९, २०७७, २३:०५:१३
बैंकबाट ऋण लिनुअघि जान्नुस्- पछिल्लाे व्याजदर, सेवा शुल्क
मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ स्थगित
घटेको सेयर बजारमा पनि ११ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए १० प्रतिशत
के आइपिओमा १० कित्ते प्रावधान हटाउन लागिएको हो?